November 8, 2010 by chowutyee တို့ဟူးသုပ်လေး လုပ်စားကြအောင်
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 55 Comments	55 Responses
အစ်မနည်းအတိုင်း ကျိုပြီး သုပ်စားပါအုံးမယ်😉
ထောဟိုနေ့ကကြိုတယ် ကြော်စားမို့ ရေနွေးနဲ့နယ်လိုက်တာ ပြီးတော့ သိပ်မမွှေဘူး အိုးကလဲကပ်နေတော့ ရလောက်ပြီဆိုမီးပိတ်လိုက်တာ ခဲဘူး ပျော့စိစိဖြစ်သွားလို့ လွှတ်ပစ်လိုက်ရတယ် ပဲမှုန့်အကျက်မုန့်နဲ့ကောလုပ်လို့ရလားမမ၀တ်ရည်
မစန္ဒကူးမေ၊ အစိမ်းနံ့ထွက်တာက ကျိုတဲ့အခါ မကျက်သေးခင် ချလိုက်မိလို့ပါ။ ရေနည်းရင်လည်း အစိမ်းနံ့မပျောက်ခင် ညောင်းစေးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျိုတဲ့အခါမှာ အစိမ်းနံ့ပျောက်အောင်ထိ မီးနည်းနည်းဖြင့် အဆက်မပြတ်မွှေပေးပါ။ အစိမ်းနံ့ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်… အစိမ်းနံ့လည်း ပျောက်ပြီ ရေမကျန်တော့ရင် တို့ဟူးကို အအေးခံလို့ ရပါပြီ။ ထပ်လုပ်စားကြည့်ပါနော်…🙂
မကူးရေ, ရေအေးထည့်တာ အရမ်းများသွားလို့ နာရီဝက်လောက် မွှေတာတောင် အနံ့မပျောက်တာပါ။ ရေမကျန်မှ အစိမ်းနံ့ကပျောက်တာပါ။ ဒါကြောင့် ရေကို သင့်တော်ရုံ ပဲစိမ်းမှနု့် ၁၅၀ ဂရမ်အတွက် ၆၀၀~ရ၀၀ မီလီလီတာ အတွင်းလောက်ပဲ ထည့်ရင် မီးနည်းနည်းဖြင့် ၂မိနစ်လောက် အဆက်မပြတ်မွှေရုံနဲ့ အနံ့ပျောက်ပါတယ်.. စမ်းကြည့်ပါအုန်းနော်..😀
Mrswin ရေနောက်တစ်ခါဆို ပိုအဆင်သွားမှာပါနော်.. တခြားဟင်းတွေလည်း လုပ်စားကြည့်ပါအုန်း..🙂
သက်ထားရေ တခြားချက်နည်းတွေလည်း စမ်းကြည့်ပါအုန်းနော်… ကျေးဇူးပါ..😀
တို့ဟူးအရမ်းကြိုက်လို့ လုပ်စားချင်နေတာကြာပြီ… အခု မ၀တ်ရည် ရဲ့နည်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ် ဆနွင်းမှုန့်နည်းသွားလို့ သိပ်မ၀ါတာပဲရှိတယ်🙂
Thanks to Tin Nwe also!!😀
mine always turn out so soft😦
yes.. 150g nearly equal with 2cups….😀 Thanks sis too
Do you happen to know preparing the salad in Shan style? If I am right, it uses vinegar instead of tamarind. Could you also post that if not trouble you so much? Maybe you could reply to this comment?😛
ရှမ်းပြည်မှာ သုပ်တဲ့ တို့ဟူးသုတ်လေးလည်း ကြိုက်တယ်..🙂
Plz try it မခင်ယမုံ..😀
there arealot of teaspoon and table spoon measures you can buy from grocery stores or supermarkets.. teaspoon, tablespoons are also widely used world wide.. i guess..🙂